Isu Tinofara Vashoma vanononoka zvakare kusvika zhizha, asi mari ichadzoserwa ... | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uri mumwe weavo vakabhadhara zita racho We Happy Few uye urikuziva kuti mutambo wevhidhiyo haupedze kusvika, kutaura zvazviri wakanonoka zvakare (zvakambononoka kusvika muna Kubvumbi), ikozvino zvinoita sekunge vagadziri vanonongedza kuti haizouye zhizha ra2018 ... unofanirwa kuziva kuti iwe unogona kukumbira kudzoserwa kwemari iwe yawakaisa muchirongwa ichi. Izvo zvinonyadzisa kana paine mapurojekiti mahombe senge aya ekupa nyika yeLinux mavhidhiyo emavhidhiyo asi ayo anozononoka kunonoka nekuda kwemamwe kana mamwe matambudziko.
Icho chinhu chisiri chakanyanya kushamisa, sezvo yakanaka vhidhiyo mitambo inoda nguva yekugadzirwa nekukwenenzverwa, kunyanya kana vagadziri vakasangana nedambudziko kana maviri panguva yekuvandudza. Asi ini ndinovimba kuti inozopedzisira yaonekwa sezvo iri zita rinokatyamadza, pamusoro pekuti vese avo vakatoisa mari mariri kana vakamirira kuti vanokodzera. Kana iwe uchida kuve wakanyanya kufambidzana nenhau dzeuyu mutambo wevhidhiyo unogona zvakare kubvunza iyo yepamutemo webhusaiti yeiyo Tinofara Vashoma chirongwa. Vagadziri vacho vakumbira ruregerero nezve kunonoka uye vatora matanho, semuenzaniso kuremadza kutenga-muchitoro chiutsi kubva Kukadzi kuitira kuti vashandisi vazhinji vasatambise nguva yavo nemari vachitenga zita racho pamberi kusvikira vaine chimwe chinhu chakajeka. Uye zvakare, izvo zvigadziriso zvinotarisirwa mune yekupedzisira vhezheni zvakakura kwazvo uye hazvifanane neiyo yapfuura vhezheni yakapihwa, saka vachadzorera mari kune avo vakabhadhara pamberi, zvisinei nemaawa avakatamba. Chiito chakanaka, hapana mubvunzo!
Ivo vari kunyatso kuva vakatendeseka uye iyo ipfungwa mukumufarira zvisinei nekunonoka. Zvese zvinoratidzira kuti isu pakupedzisira tichazove nazvo paLinux nguva pfupi mushure mekuburitswa kweiyo Windows vhezheni, saka pamwe pakati kana mukupedzisira kwezhizha, ndiani anoziva ... Mune ino kesi vakashanda ivo pachavo pane vhezheni yepenguin chikuva, uye kwete ivo vakatendera vechitatu-bato studio kuti vatore mutambo wevhidhiyo sezvatakaona mune nyaya yeFeral Interative nevamwe. Saka vakazvipira kunharaunda uye havatarisiri kuvadzikisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Isu Tinofara Vashoma vakanonoka zvakare kusvika zhizha, asi ivo vachadzorera mari ...